Sidee ayey warbaahinta Imaaraadka u hadal heysaa safarka Farmaajo ee Qatar? - Caasimada Online
Home Warar Sidee ayey warbaahinta Imaaraadka u hadal heysaa safarka Farmaajo ee Qatar?
Sidee ayey warbaahinta Imaaraadka u hadal heysaa safarka Farmaajo ee Qatar?
Muqdisho (Caasimada Online) – Warbaahinta dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa aad u hadal haya Booqashada uu Madaxweyne Farmaajo ku tagay magaalada Dooxa ee dalka Qadar.
Si kastaba ha ahaatee, Dowlada Imaaraadka carabta ayaa Saxaafada u adeegsaneysa dagaal Siyaasadeedka ay kula jirto Dowlada Somalia oo ay u aragto caqabad hortaagan.